SARCOIDOSISUK पेटेंट सूचना केन्द्र
SarcoidosisUK को सार्कोडोसिस को बारेमा उच्च गुणवत्ता वाला रोगी को जानकारी को एक विस्तृत श्रृंखला छ। हाम्रो सबै जानकारी विशेषज्ञहरु को सहायता संग विकसित गरिएको छ र प्रयोग गर्न को लागी नि: शुल्क छ।
SarcoidosisUK को रोगी सूचना हबमा स्वागत छ।
SarcoidosisUK थाहा छ कि sarcoidosis भ्रमित हुन सक्छ, विशेष गरी नयाँ निदान रोगीहरूको लागि।
हाम्रो लक्ष्य कुनै पनि व्यक्तिलाई sarcidosis को बारेमा स्पष्ट, गुणस्तर र सही जानकारी प्रदान गरी अनिश्चितता कम गर्न हो। सार्कोडोसिस को बुझ्न को लागी रोगहरु लाई हाम्रो लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ र हामीले धेरै गम्भीरतासाथ केहि कुरा गर्दछौं। हाम्रो सबै रोगी जानकारी विश्वसनीय मेडिकल विशेषज्ञहरु को सहयोग संग उत्पादन गरिन्छ र प्रयोग को लागी मुफ्त को लागी निःशुल्क छ।
हाम्रो सरकोडोसिस बारे पृष्ठ आवश्यक सबै को लागि सामान्य र आधारभूत जानकारी शर्त को लागी पढ्न आवश्यक छ। थप जानकारीका लागि कसरी सरकोडोसिसले प्रभाव पार्छ विभिन्न अंगहरूले लिङ्कहरू प्रयोग गर्छन् Sarcoidosis को प्रकार पृष्ठ। यो सबै जानकारी माथि हृदय चिकित्सा विशेषज्ञहरु संग, कार्डियोलोजिस्टहरू ओन्कोलोजिस्टहरूमा, र रूपमा उपलब्ध छ रोगी सूचना पत्रहरू। यी मुद्रित प्रतिलिपिहरूको रूपमा अनलाइन, डाउन्लोड गरिएका वा आदेशहरू पढ्न सकिन्छ।
यो स्वाभाविक छ कि रोगीहरूले आफ्नो sarcoidosis को बारेमा धेरै प्रश्नहरू छन्। SarcoidosisUK ले यी प्रश्नहरू रेकर्ड गरी र सुनेको छ। त्यसपछि हामीले सर्कोडोसिस विशेषज्ञ विशेषज्ञहरू, सरकोडोसिस युके नर्स र हाम्रो सहयोग समूहका सदस्यहरूको टोलीले जवाफ दिएका थिए। The Sarcoidosis FAQ पृष्ठ यो सबै जानकारी समावेश छ र 'दिनदेखि दिनको' सम्म 'उपचार' को अवस्था को विभिन्न पहलुहरु को बारे मा अधिक जान्न एक महान स्थान हो।
SarcoidosisUK थाहा छ कि यो तपाईंको क्षेत्र मा सबै भन्दा राम्रो sarcoidosis विशेषज्ञ खोज्न गाह्रो हुन सक्छ। हामीले कडा काम गरेका छौं र देशभरि सबै भन्दा राम्रो सल्लाहकारहरु खोज्नुभएको छ। यी विवरण हाम्रो मा प्रकाशित गरिएको छ Sarcoidosis परामर्शदाता निर्देशिका, यूके मा यो एक मात्र प्रकारको एक मात्र। तपाईं स्थान, नाम वा शर्त द्वारा खोज्न र सन्दर्भको लागि विवरण प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ।
हामी हाम्रो रोगीको जानकारी सबै समय बढ्दैछौं। वेबसाइट मार्फत उपलब्ध अन्य जानकारी अधिक मा समावेश गर्दछ थकान, पोषण निर्देशन, बच्चाहरु, र यात्रा सल्लाह.
हामी धैर्य जानकारी SarcoidosisUK प्रदान गर्दछन्। तथापि कुनै पनि बिना उदार दान बिना सम्भव छ। यदि तपाईंले हाम्रो कुनै जानकारीबाट लाभ उठाउनुभयो भने, आज सरकोडोसिसयू को दान गर्न को लागी विचार गर्नुहोस्.
रोगी सूचना को प्रमुख, सरकोडोसिसयू
यदि तपाईं sarcoidosis को बारेमा सामान्य जानकारी खोज्न चाहानुहुन्छ, यो सुरू गर्न ठाउँ हो। यो जानकारी कुनै पनि नयाँ निदान रोगीहरू वा साथीहरू र परिवारका लागि एकदम सही छ जुन बढी खोज्न चाहान्छ।
Sarcoidosis को बारेमा थप पढ्नुहोस्
सरकोडोसिस शरीरमा कुनै पनि अंगलाई असर गर्न सक्छ। हामीले सहरको सारा सल्लाहकारहरू sarcoidosis को सबै भन्दा सामान्य रूपहरूमा उच्च गुणस्तरको रोगी जानकारी पत्रपत्र प्रदान गर्नका लागि छौँ।
पढ्नुहोस्, लिफ्टहरू डाउनलोड वा अर्डर गर्नुहोस्
सरकोडोसिस एक जटिल रोग हो - यो रोगीहरु लाई धेरै प्राकृतिक प्रश्नहरु को लागी स्वाभाविक छ। SarcoidosisUK ले यी प्रश्नहरू सङ्कलन गरेका छन् र उत्तरको लागि हाम्रो विशेषज्ञ टोली (क्लिनिकहरू, नर्सहरू र बिरामीहरू सहित) परामर्श गरे।
हामी जान्दछ कि यो एक विशेषज्ञ को खोज्न को लागी मुश्किल छ जो सार्कोडोसिस को बारे मा जान्छ र सर्कोडोसिस को रोगहरु को बारे मा परवाह गर्दछ। तपाइँलाई राम्रो हेरचाह पत्ता लगाउन सहयोग पुर्याउनु भएको छ हामीले हामीले यूकेको मात्र sarcoidosis विशेषज्ञ डेटाबेस सिर्जना गरेका छौं।
एक परामर्शदाता खोज्नुहोस्